Witkoppen Clinic: Hopitaly Tsara | Malagasy kasahorow
Alakamisy. Desambra 2, 2021
Jozi, Alakamisy. Septambra 10, 2020 - Zoma. Oktobra 29, 2021. 𓀠 48
Nanorina hopitaly izy ireo. Dia Witkoppen Health and Welfare Centre ny anarana ny ny hopitaly.
Iza?: Nanorina ny hopitaly telo mpitsabo mpanampy. Dia mpitsabo Jean Bassett ny mpitantana.
Ahoana?: Manompo ny faritra ny hopitaly.
Manao HIV fitsapana izy ireo sy TB fitsapana.
Mitsabo aretina aretina mitaiza sy aretina ara-tsaina izy ireo.
Mahita 8500 olona volana isakiny ny hopitaly.
Mandoa vola R70 olon-dehibe.
Mandoa vola R50 zanaka.
Olona antitra, tranainy sy mandoa vola tsisy olona sembana.
Ndia mpifindra monina 30%.
Ndia tsy an'asa 46%.
Ndia R1700 ny fidiram-bola ara-dalàna.
#fanapahan-kevitra #izy ireo #manorina #hopitaly #anarana #aiza #Johannesburg #rahoviana #1946 #iza #telo #mpitsabo mpanampy #mpitantana #mpitsabo #Jean #Bassett #ahoana #manompo #faritra #manao #fitsapana #mitsabo #aretina mitaiza #aretina #ara-tsaina #vokatr'izany #mahita #8500 #olona #isakiny #volana #olon-dehibe #mandoa vola #zanaka #antitra, tranainy #sembana #tsisy #2010 #loharanombaovao #mpifindra monina #tsy an'asa #ara-dalàna #fidiram-bola
Tantaram-Piainana: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur
Fanampiana - Karohy, Tadiavina - Fizahanteny - Boky Toeram-Pivarotana - Kalitao Tsara - Vaovao | Anontany Fanontaniana